I-Traditional Finnish Summer Cottage - I-Airbnb
I-Traditional Finnish Summer Cottage
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Anni
Indlu yasehlobo ngasechibini. I-sauna ifudunyezwa ngezinkuni, izinkuni zokubasa azikhokhiswa. Ngaphakathi kwendlu encane kukhona indawo yokucima umlilo, itafula lokudlela elihle, ikhishi elinezinto zokudla eziyisisekelo, usofa omkhulu othokomele kanye nombhede wabantu ababili. Egunjini lokushintsha elixhunywe ku-sauna kunemishini emincane yasendlini. Izoso kanye nesikebhe sokugwedla nakho kuyasetshenziswa.
I-Laitila - 22 min
I-Mynäki - 25 min
Ukupheka - 30 min
I-Rauma - 45 min
I-Turku - i-45 min, i-55 km
I-Helsinki - 2 h 20 min, 220 km
Umenzi wekhofi, ihobhu eyodwa (ihobhu kagesi), i-microwave kanye nesiqandisi kutholakala endaweni yokushintsha. Bonke basebenza ngogesi. Lapho ungashaja amafoni akho namalaptop njll. I-grill yegesi isethaleni kanye nezihlalo kanye netafula. Ungaya emanzini usuka ogwini noma ugxume usuka esikhumulweni semikhumbi eside. Amanzi ajulile ekugcineni kwedokodo, aphephile.
Kukhona indlu yangasese yangaphandle. Emanzini agelezayo, ungathola amanzi okugeza ku-sauna echibini. Amanzi okuphuza kufanele uzilethele wena. Letha ilineni lakho lombhede namathawula noma ukubhukhe ngaphambi kokufika kwakho ukuze uthole imali eyengeziwe. Ngazise uma uzidinga uma ubhukha. Izilwane ezifuywayo ezincane zamukelekile.
Ikotishi linganela abantu abaningi, kunombhede womatilasi ababili +. Ngakho-ke uma ungaphezu kuka-4, wamukelekile
Izikhathi zokungena / zokuphuma eziguquguqukayo zingenzeka. Lendawo iphethwe yimi nomama nomamncane, ngakho-ke kukhona / abanye bethu bazoba nawe lapho uhlola futhi uphume uma kunesidingo futhi uyatholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho. Sikhuluma isiFinnish nesiNgisi, futhi nesiSwidi, isiFulentshi nesiDeutsch kancane! :)
Izilimi: English, Suomi, Français, Svenska